Ukuvuselelwa Kobuntu Okusha Kwe-Scream Tv
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ukuvuselelwa Kobuntu Okusha Kwe-Scream Tv
by admin April 7, 2014 952 ukubukwa
Uhlobo lwe-TV lwe-Scream ekugcineni lusakaza futhi ludubula umshayeli wabo. TVLine ubambe izincazelo zezinhlamvu ezizosetshenziselwa ukusakaza iskripthi. Ukulandela kanye nama-movie, uchungechunge lwe-Scream TV lubonakala lunabalingisi ikakhulukazi abasebasha.
UHarper Duval: Unobuhle oneminyaka engu-16 "ongena kancane futhi onobuhlakani bokungaba uvemvane lomphakathi" kepha nokho umenyezelwe yisixuku esidumile ukuthi abe ngomunye wabo. "Uzizwa enecala lokuthi useshiyile kumngane wakhe wangaphambili omkhulu u-Audrey," kodwa okungenani unobuhlobo 'be-Gilmore Girls'-esque nomama uMaggie ukuze agcine ingqondo yakhe ihluzekile.
U-Audrey Jesen: Owayekade eyi-BFF kaHaper uchazwa “njengendodakazi enelukuluku lokufuna ukwazi yomfundisi waseLuthela” “obukeka ebopha kakhulu kunobuhle.” Lo "loner wobuciko" uphupha ngokuba ngumenzi wamafilimu futhi wabelana ngokusondelana nochwepheshe wobuchwepheshe uNowa.
UNowa Foster: Isifuba sika-Audrey "sinobuciko, ubuhlakani nobuchwepheshe obanele ukuba abe uSteve Jobs olandelayo." Unenhlanhla ngaye, unamahlaya (“a la John Cusack ebusheni bakhe obusha”) amsizayo ekuzulazuleni emahholo esikole sakhe esiphakeme. Ngaphezu kwalokho, uNowa "unolwazi lwe-encyclopedic lwezincwadi, amafilimu, i-TV, izinhlelo zokusebenza, njll."
UMargaret “Maggie” Duval: Umama kaHarper, esanda kweva eminyakeni engu-40 ubudala, ungumhloli wezokwelapha kuleli dolobha, “isazi esikhulile esidlala ngobuhle baso.” UMaggie uchitha isikhathi sakhe esiningi ezama ukuvala isikhala sokuthi ubaba kaHarper wabashiya. O, futhi ufihle “imfihlo emnyama yomlando wakhe.”
Kubhalwe nguJill Blotevogel (I-Ravenswood, Isiqhingi saseHarper, Eureka), umshayeli wendiza uqala ngevidiyo ye-YouTube ehamba ngegciwane, okuzoholela ezinkingeni zentsha u-Audrey futhi okubonakala sengathi isebenza njenge "Isikhubekiso sokubulala esivulela ifasitela umlando wakubo wedolobha onezinkinga."
Ucabangani ngokukhwaza kuphendulwe uhlelo lwe-TV? Sazise emazwaneni.
Nangenxa yabo bonke nina BAMEMEZELA ABALANDELI BAMA-SUPER laphaya. Bheka leli qoqo elimangalisayo:
Wonke ama-movie we-SCREAM amane afakiwe kuma-Editions akhethekile abaqoqi, ne-SCREAM 2's Collector's Edition etholakala kuphela ngale sethi ebhokisini. Idiski ekhethekile ifaka idokhumentari yangemuva kwezigcawu, ukuhlolwa kwesikrini, ukuphuma, kanye nesici esikhethekile seGumbi lokusika esivumela ababukeli ukuhlela izigcawu ekhaya. Izici ze-DVD-ROM zifaka i-screensaver, umdlalo we-trivia, i-screenplay nohlu lwama-shot.
Chofoza lapha ukuze uthenge!